Camay: ISIS ma ay sii haysan doonaan Qandala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCamay: ISIS ma ay sii haysan doonaan Qandala
November 16, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa sheegay in kooxda ISIS aysan sii haysan doonin magaalada Qandala ee gobolka Bari oo ay dhawaan qabsadeen.
“Ciidamadayada waa diyaar, dhawaana waan kala wareegi doonaa magaalada Qandala maleeshiyada,” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka oo wareysi siiyay idaacada maxaliga ah ee Daljir.
“Insha’alaah, ma ay sii haysan doonaan.” Ayuu ku daray Camay.
Bishii la soo dhaafay Oktoobar, in ka badan 50 dagaalyahan oo taageersan ISIS uuna hoggaaminayo sargaal hore oo Al-Shabaab ah Cabdiqaadir Muumin ayaa qabsaday magaalo xeebeedka Qandala ee kutaala gobolka Bari, walina waa ay haystaan, sida ay dadka deegaanka sheegayaan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada iskaashiga caalamiga ah ee Jarmalka GIZ oo wakiil uga ah wadamada Midowga Yurub mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa kasoo horjeesatay musuq-maasuq la [...]